रोजगारीको लागी विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ ठगीबाट बच्ने सजिलो उपाय » Khulla Sanchar
रोजगारीको लागी विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ ठगीबाट बच्ने सजिलो उपाय
काठमाण्डौ- नवलपरासीका ईश्वरी पौडेल साउन १० गते यूएई उड्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । घरबाट ८ गते बिदा भएर निस्कने तयारीमा रहेका ईश्वरीलाई ५ गते नै काठमाण्डौबाट एक जना साथीले फोनमा भने, विदेश उडाउने एजेण्ट त भाग्यो ।
प्रहरीबाट अवकाश लिएका ईश्वरीलाई एजेण्ट रम्तुल्ला मियाले यति विश्वास दिलाएका थिए कि आफू प्रहरी भएर पनि शंका गर्ने ठाउँ नै भेट्नुभएको थिएन । भिसा आयो भन्दै इमोमार्फत कपी पठाएका थिए । १० गते उडान हुन्छ भनेर मिति नै तोकेका थिए ।
तर यति धेरै विश्वास दिलाएका एजेण्ट ईश्वरीको पैसा लिएर बेपत्ता भए । ईश्वरी त नचिनेका एजेण्टको कुरामा विश्वास गर्दा ठगीमा पर्नुभयो । तर बाराका बर्मदेव यादवलाई त आफ्नै मामाले ठगे ।
बर्मदेवलाई उहाँका मामाले असार १२ गतेभित्र ओमान पठाइदिने भन्दै ८५ हजार रुपैयाँ मागे । मामाले नै विदेश पठाइदिन्छु भनेकाले उहाँले सयकडा पाँचका दरले ऋण काढेर मागेजति पैसा दिनुभयो ।
तर टीकाटालो गरेर पैसा दिनुपर्ने मामा उल्टै भाञ्जाको पैसा कुम्ल्याएर फरार भए । पाँचथरका भुपेन्द्र बुढाथोकी कतार जानका लागि काठमाण्डौ आउनुभएको थियो । रसियाबाट फर्किएका एक जना आफन्तसँग भेट भयो ।
उनले अष्ट्रेलिया पठाइदिने एक एजेण्टसँग भेट गराइदिए । ‘खाडीमा पाँच वर्षमा हुने कमाइ त यूरोपियन देशमा एक वर्षमै हुन्छ, खाडी नजाउ भन्नुभयो, होला भनेर पत्याएँ, तर पैसा मात्र फस्यो,’ भुपेन्द्रले भन्नुभयो ।
अष्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भन्दै १५ लाख रुपैयाँ लिएपछि एजेण्ट नरेन्द्र खाती फरार भए । घर धितो राखेर एजेण्टलाई पैसा बुझाएका भुपेन्द्रलाई बेपत्ता भएका एजेण्ट खोज्नु कि घरको किस्ता तिर्न काम गर्नु ? आपत परेको छ ।
तर हिजोआज विदेश जानका लागि यसरी एजेण्टको भर पर्न पर्दैन । आफू चनाखो हुने हो भने आफूले रोजेजस्तै काममा विदेश जाने र ठगीबाट बच्ने विभिन्न उपाय छन् ।
एजेण्टको भर नपर्ने
सरकारले एजेण्टको व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । कुनै पनि म्यानपावरले अब एजेण्ट राख्न पाउँदैनन् । त्यसैले कसैले यो कामका लागि यो ठाउँमा लगिदिन्छु भन्दै भन्छ भने त्यो गैरकानुनी हो । कोही पनि एजेण्टले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा लैजान सक्दैन ।
एजेण्टको व्यवस्था खारेज भएसँगै कोही पनि व्यक्तिले अब वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउने छैनन् ।
इजाजत प्राप्त म्यानपावरले मात्रै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त कसैले विदेश पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न आश्वासन देखाउँछ भने सचेत हुनु पर्छ ।
कुनै पनि म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित काम गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त हो कि होइन, उसको अवस्था कस्तो छ, विभागको कारबाहीमा पो परेको छ कि भन्ने जस्ता कुरा बुझ्नु पर्छ ।
बैंकबाट कारोबार गर्दा सावधानी अपनाउने
हिजोआज विदेश पठाइदिन्छु भन्दै पैसा लिने र फरार हुने क्रम बढ्दो छ । प्रमाण नहुँदा न्याय पाउन पनि मुश्किल हुन्छ। त्यसैले विदेश जानका लागि कसैलाई पनि पैसा दिँदा आईएमई गर्दा होस् या अरु माध्यमबाट दिँदा होस्, वैदेशिक रोजगारीका लागि दिएको भनेर लेख्नु पर्छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पैसा दिँदा बैंक खाताबाट बैंक खातामा पैसा पठाउनु हुँदैन । बैंकबाट बैंकमा पठाउँदा लेनदेन हुने र लेनदेनलाई विभागले कारबाही नगर्ने विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँले बताउनुभयो ।
सकेसम्म बैंकमार्फत कारोबार नगर्न र आईएमईमार्फत पठाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि लेख्न उहाँको अनुरोध छ । प्रमाण बिना विभागले कारबाही नगर्ने भएकाले आर्थिक कारोबार गर्दा आफू सचेत हुन आवश्यक छ ।